Kumannaan qof oo isugu tagay garoonka Chapecoense - BBC Somali
4 Disembar 2016
Image caption Dadka ayaa u badan taageerayaashii kooxda ku dhammaatay shilka diyaaradeed
Tobannaan kun oo qof ayaa ka qeybgalaya xus ka dhacayo magaalada Chapeco ee dalka Brazil.
Waxaa halkaasi lagu xasuusanayaa kooxdii ciyaartoyda reer Brazil ee ku dhimatay shilkii diyaaradeed eek a dhacay dalka Colombia.
Askar sida maydadkii ciyaartoyda ayaa ku sugan garooonka kooxdaasi, halkaas oo 20 kun oo qof ay ku sugan yihiin.
Madaxweynaha dalka Brazil, Michel Temer, ayaa ka mid ah dadka garoonkaasi ku sugan.
Xukuumadda Kolombia ayaa sheegtay in ay sii kordhayaan caddaymaha ku saabsan in diyaaraddii wadday ciyaaryahannada kubadda cagta ee reer Brazil ay burburtay iyada oo isku dayaysa in ay dagto ka dib markii ay shidaal la'aan noqotay.
Madaxa hay'adda duullimaadyada dadwaynaha Alfredo Bocanegra ayaa sheegay in baaritaannada hore ay tilmaamayaan in diyaaradda aysan shidaal ku jirin markii uu shilku dhacay.
Waxay u muuqataa in ay cadayn u tahay arrintaas cod la shaaciyay oo laga dhexmaqlayo duuliyaha oo dalbanaya in loo ogolaado in uu si dagdag ah u dago ayna haysato shidaal la'aan iyo cilad kale.
Lix ruux oo ka mid ah 77 ruux ee saarnaa ayaa badbaaday.
Freddy Bonilla oo ka tirsan masuuliyiinta hay'adda duulimaadyada dadwaynaha oo isna ka hadlay isla shirkaas jaraaid ayaa sheegay in sharcigu uu cayimay in diyaaraduhu ay wataan shidaal dheeri ah oo ay sii isticmaali karaan soddon daqiiqo si ay garoonkale ugu dagi karaan haddii xaalad dagdag ah ay timaado.
Caalamka oo ka tacsiyeynaya kooxdii ku dhammaatay shilka